Sheekadayda — Raymond Dehn for Minneapolis
Waxaan ahay jiilka afaraad Northsider, oo hadda ku nool xaafaddaha Jordan.
Sida dad badan oo ku koray fursado yar, waxaan ku dhex maray nidaamka caddaaladda gudaha. Iyada oo la kaashanayo bulshadeyda iyo dhammaan kuwa i soo dhaweeyay, waxaan ku faraxsanahay inaan haysto fursad aan ku barbar dhigo jihada cusub ee noloshayda. Waxaan ku faraxsanahay inaan noqdo musharax xafiiska ugu sareeya ee Minneapolis.
Anni iyo seddexdedda walaaloyaal waxaan ku kornay Brooklyn Park. Aabahey ayaa maalmaha uu ku shaqeynayey bakhaarada forklift. Hooyaday waxeey ka shaqayjirtay shirkad samaysa waraaqo musqusha oo loogu talagalay askar Maraykan ah oo ku sugnaa Vietnam. Dakhliga dheeraadka ah aabahay barafka ay oo xaadijaray, dhamaantankenu na waan caawinjarnay. Waxaan ku tiirsanjarney jeeg kasta. Anigoo ah da'yar, waxaan gaaray go'aano xun. Waxaan bilaabay cabbitaanka iyo daroogo, ugu dambayntii waxaan u baahdhay lacag si aan u taageero caadada daroogo. Sannadkii 1976-kii waa la ii xiray waxaana laeegu xukumay tuugo - dhacdo. M arkii dambe ii ogolaatay inaan naftayda dib u celiyo. Ka dib markii aan xabsiga ku jiray toddoba bilood, waxaa layga siiyay barnaamij daaweyn daroogo ah oo ku yaal Xarunta Caafimaadka ee Hennepin County. Ma aanan taabanin daroogo 40 sano. Waxaan codsadey oo aan ka helay cafis buuxda oo ka yimid Gobolka Minnesota 1982 si aan mar labaad u codbixiyo.
Anigaa mudnaanta leh. Waxaan ku noolahay sidii aan weligay dembi u geysan. Waa nidaam aan cadaalad ahayn. Qaar badan oo ka mid ah asxaabteyda lama siin doono fursad isku mid ah oo uu nidaamku i siiyay sababtoo ah waxaan ahay nin cadaan ah.
Iyada oo fursaddayga labaad, ayaan dib ugu laabtay dugsiga. Waxaan ka qalinjabiyey Jaamacadda Minnesota sanadkii 1993-dii oo aan ka ahaa shahaadada dhismaha. Weli waxaan dib u bixiyaa amaahda ardayga. Waxaan ahaa madaxweynaha qaranka ee Machadka Manhajka Ameerika ee Maraykanka, waxaan u dooday 35,000 ardayga dhismaha oo Maraykan iyo Canada ka diganayey. Waxaan bartay awoodda ururada dadweynaha.
Kadib waxaan u wareegay Waqooyiga Minneapolis waxaanan ku biiray bulshadeyda xubin ka mid ah guddiga xaafadda. Waxaan ka shaqeeyey ka hortagga musuqmaasuqa ee guryaha, dib-u-habeynta garsoorka dembiyada, iyo sameynta helitaan siman ee gaadiidka dadweynaha. Iyadoo loo marayo Northside Community Reinvestment Coalition, waxaan ku xidhay dariskayga in ay caawiyaan haddii ay hoos u dhaceen bishiiba. Waxaan ku biiray siyaasadda doorashada Waxaan caawiyey Senator Paul Wellstone oo hadda dintay, kadibna waxaan caawiyey Wakiilka Gobolka Keith Ellison. Waxaa sidoo kale la i siiyey abaalmarin Bush Fellowship ah, oo aan ku qaatey barashada sida dadka ee oo daawacmaan sababta ee ogo noqooto markaan magaalooyinka aan dhisno.
Dhammaan arrimahan ayaa igu hogaaminayey inaan u ordo oo loo doorto Golaha Sharci-dejinta ee Gobolka 2012, oo wakiil aan ka ahay Degmada 59B, oo ay ku jiraan Northside, Bryn Mawr, North Loop, Elliott Park, iyo Downtown.
Waad ku mahadsan tahay fursada aad ku heli karto kalsoonidaada iyo codkaaga.